Usoro ihe omuma ohuru ohuru na ahia | Martech Zone
Smartphones na ndabere nke ụlọ ahịa eletrọniki. Ngalaba ekwentị mkpanaaka na ụlọ ahịa ọgbara ọhụrụ. Lọ ahịa gadget nke oge a.
Lọ ahịa bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ onye ọ bụla. Ọ bụ igwe zuru ụwa ọnụ mepụtara iji zipu ma jeere ndị ahịa gafere mba niile. Ọ na-atọkwa ndị mmadụ ụtọ ịzụ ahịa na brik na-ngwa agha na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na ụlọ ọrụ na-ere ahịa zuru ụwa ọnụ bụ aturu anya iru $ 29.8 trillion na 2023. Mana, ọ nweghị ike ime ya n'onwe ya.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ụlọ ọrụ na-ere ahịa kwesịrị iji na-agba ọsọ na mmepe ọgbara ọhụrụ. Followinggbaso mgbanwe ndị ahụ na ịnabata ha ga-enye ohere maka mmụba ka ukwuu nke ụlọ ọrụ mkpọsa.
Nchịkọta Akụkọ Banyere Akụkọ Banyere Rlọ Ahịa
Storeslọ ahịa ụlọ ahịa anaghị adabere na ịntanetị na-arụ ọrụ mgbe niile. Na mbụ, ndị mmadụ gbanwere ngwongwo na ehi n’etiti onwe ha ma rụsie ọrụ ike inwe ọtụtụ ihe ha ga-enye. Lọ ahịa ụlọ ahịa mbụ pụtara ihe dịka 800 BC. Ahịa malitere ịmalite ebe ndị ahịa na-ere ngwongwo ha. Ebumnuche nke ahịa bụ ịzụ ahịa maka ngwaahịa kamakwa ịmekọrịta mmekọrịta.
Site n'ebe ahụ, ụlọ ahịa na-eto eto. N’afọ ndị 1700, obere ụlọ ahịa nne na-pop nwere ezinụlọ malitere ịpụta. N’agbata etiti afọ ndị 1800 ruo n’afọ 1900, ndị mmadụ na-emepe ụlọ ahịa ngalaba mbu. Ka obodo na azụmaahịa mepụtara, ego ndekọ nke mbụ bịara, yana kaadị kredit na ụlọ ahịa.
Ọsọ ọsọ gaa na oge ịntanetị. Mgbanwe data elektrọnik (EDI) na 1960s mepere ụzọ maka ecommerce nke gbagoro n'ocheeze na 1990s mgbe Amazon rịgoro ebe ahụ. Site n'ebe ahụ, mkpọsa ahụ dabere na teknụzụ, yana ecommerce na-agbasawanye na ntanetị. Taa, mgbasa ozi mmekọrịta na-enye ọtụtụ ohere maka mgbasa ozi, mana ndị nwe ụlọ ọrụ na-ele anya na-agbanwe agbanwe omume ndị ahịa iji nọrọ na egwuregwu ahụ.
Rdị Mgbanwe Ọhụrụ
Storeslọ ahịa na-ere ahịa nwere njikọ chiri anya na ịntanetị na nyocha nke omume mmadụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-echebara echiche:
Ahụmịhe onye ọrụ
Ọnụnọ mgbasa ozi mmekọrịta
Otú ọ dị, nke ahụ abụghị ihe niile. Lọ ọrụ ụlọ ahịa nke oge a kwesịrị ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa na-atọ ụtọ n'ihi na ndị mmadụ anaghị enwe ndidi n'oge a. Dị ka Philip Green si kwuo, “Ndị mmadụ na-aga ahịa. Ọtụtụ n'ime mgbalị anyị bụ naanị: 'Olee otu anyị siri eme mkpọsa ụlọ ahịa ahụ nnukwu?' ”
Ka ịntanetị wetara ụzọ ndị ọzọ iji rute ndị ahịa, ndị ahịa ghọtara na ha nwere ike karịa ka ọ dịbu. Taa, ndị mmadụ chọrọ sekọnd ole na ole iji mee mkpebi, ọ na-emetụtakwa etu ndị ahịa si agwa ndị na-ege ha ntị okwu. Nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara akparamàgwà ndị ahịa Ebe a.
Iji nweta afọ ojuju dị elu, ndị na-ere ahịa na-eji teknụzụ eme ihe niile. Nke a bụ otú.
Ndepụta Ngwaahịa Ndepụta - Electronic Data Mgbanwe (EDI) na-enye ohere maka kọmputa na-kọmputa mgbanwe nke azụmahịa akwụkwọ. Ọ na-ebelata ọnụahịa, na-abawanye ọsọ mbufe data, na-ewedata njehie, ma na-eme ka mmekọrịta azụmahịa na-abawanye. Ọ na-enyere aka maka nsuso dị mfe nke azụmahịa n'etiti ndị na-ebu ngwaahịa na ụlọ ahịa ahụ.
Usoro mmechi akpaaka - sistemụ ndị a na-arụ ọrụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla, na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịgbakọ na ịkwalite mmejupụta nke ọtụtụ ụdị ngwaahịa, site na mkpụrụ ọhụrụ na uwe. Ebe ọ bụ na usoro a na-akpaghị aka, ndị ọrụ nwere ike ilekwasị anya na ọrụ ha na-enweghị atụ egwu ngwaahịa furu efu ma ọ bụ nke emebi emebi na shelf.
Shelf Virtual - ụlọ ahịa na-ere ahịa nke ọdịnihu nwere ike ọ gaghị enwe ngwaahịa na ngwaahịa. Kama, ha ga-enwe kiosks dijitalụ ebe ndị ahịa nwere ike i scanomi ngwaahịa. N'ụzọ ụfọdụ, nke a ga-abụ mgbakwunye brik na-ngwa agha nke ebe nrụọrụ weebụ na-ere ahịa, na-enye ezigbo ahụmịhe ịzụ ahịa n'ezie.
AI na-edeba aha - ụdị ndebanye ọhụụ na-eme ka ndị ahịa nyochaa ihe ha na-enweghị ego. Ihe ndekọ Smart bụ ngwọta kachasị ọhụrụ maka ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa mmiri. Agbanyeghị, enwere ohere ị ga-eto ma melite sistemu nke njirimara ihe, njirimara ndị ahịa, na ịkwụ ụgwọ.
AR na VR na mkpọsa - ihe ohuru ohuru nke teknụzụ nke na eme ka ahụmịhe ịzụ ahịa ahụ ka mma bụ eziokwu ma mewanyewanye. Ọ bụ ezie na ndị na-azụ ahịa na-ekpori ndụ ịnwale uwe ma ọ bụ na-enyocha arịa dị iche iche, ụlọ ọrụ na-enwe ọnụego belatara. AR na VR na-enyekwa usoro ahia ndi ozo na ngwa ndi ozo na ndi ozo.
Nsochi mgbama - mgbama bụ ngwaọrụ ikuku nwere ike ịchọpụta ndị ọrụ ekwentị. Ngwaọrụ ndị a na-enyere ụlọ ahịa ahụ aka iso ndị ahịa budata ngwa ekwentị ha. Iji mgbama, ụlọ ọrụ nwere ike ikwurịta okwu na ndị ahịa, sonye na azụmaahịa oge, mụbaa ahịa, ghọta omume ndị ahịa, na ndị ọzọ.
Akpaaka mbupu - ngwa ngwa mbupu na-echekwa oge bara uru enwere ike iji mee mkpebi ma ọ bụ usoro ndị ọzọ. Ieslọ ọrụ na-eji sọftụwia atọọ iwu maka iwu mbupu, dịka ọmụmaatụ. Ulo oru ahia nwekwara ike machiini ndi edere, akwukwo ego, ihe ndi edetu, ihe ndi ozo, wdg.
robotics - robot ga - ewere ụfọdụ ọrụ mmadụ. Dị ka ha si ekpopụ ụlọ ọgwụ n'oge ọrịa coronavirus, A na-ejikwa ígwè ọrụ na-ebupụ ngwongwo site na shelf, nyochaa ngwongwo, ma dị ọcha. Ha nwekwara ike dochie anya ndị ahịa na-echekwa ma ọ bụ dọọ aka ná ntị gbasara ihe egwu.
Lọ ahịa na-ere ahịa esiwo ụzọ dị anya site n'ụlọ ahịa nne na-pop gaa na shelf ndị dị adị. Ejikọtara ya na mmepe nke teknụzụ, azụmaahịa azụmaahịa ebirila ma nabata mgbanwe teknụzụ. Taa, ha na-eji usoro niile dịnụ mee ka ndị ahịa na-azụ ahịa ma na-enye ịzụ ahịa na-enweghị ntụpọ.
Ihe omuma ohuru ohuru, dika robotik, ngwa ngwa na-akpaghị aka, eziokwu nke mebere, na mgbama di nso, na-enyere ndi oru aka aka idi ndu nke ndu ndi mmadu. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike iji usoro ịzụ ahịa ndị ọzọ jikọtara yana ahụmịhe ịzụ ahịa ka mma iji gosi ngwaahịa ha ma gosipụta na akara ha dị mkpa.
Tags: ai na-edebanye ahaAmamịghe echichekwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuakpaka replenishment usoroNdepụta ngwakọmbọhọ mgbamaire ere ahịaahịa ahiarobotics mkpọsaMgbasa mgbasa ozi mgbasa oziteknụzụ mkpọsaere ahịaahụmịhe ndị ahịa ahịaụlọ ahịa weebụvirtual eziokwushelf mebere